I-Suin Ranch: Indawo egqibeleleyo yasemaphandleni - I-Airbnb
I-Suin Ranch: Indawo egqibeleleyo yasemaphandleni
Ukuzola kuza ngqo kuwe
I-Suin Ranch likhaya elinomtsalane ngokumangalisayo, mhlawumbi elona liphawulwe kakuhle yiveranda yayo enkulu engaphambili ejonge ihlathi eliqengqelekayo laseMuak Lek, iigadi eziluhlaza ezothusayo ezinendawo eninzi yokuhlala kunye neendawo zokuphumla onokukhetha kuzo. Yonwabele indlela yokuhamba wenze umthambo wasekuseni. Yenziwe yanamhlanje yangaphakathi yangaphakathi, inamagumbi okulala abanzi kodwa asekhaya, kunye nendawo enkulu ephezulu elungele ukusingatha iminyhadala emincinci, iisemina, kunye neendibano zocweyo (okanye ukwenza i-yoga!).
Ukubaleka ngaphambili kwepropathi yindawo enkulu yeveranda apho uya kuqiniseka ukuba uchitha ixesha lakho elininzi ukonwabela umoya omtsha kunye nemibono emangalisayo yendalo yale ndawo imangalisayo. Ngaphakathi uya kufumana igumbi lokuhlala eliphambili, eliqaqambe kakhulu kwaye likhululekile, linendawo yokutyela encinci, iibhedi ezipholileyo, indawo yekhitshi kunye nendlu yangasese.
Kukho amagumbi okulala ama-3 ewonke, ngalinye linebhedi ephindwe kabini kunye nendawo eninzi yewadilophu. Igumbi lokulala eli-1 kunye ne-2 liphumile kwigumbi lokuhlala elinegumbi lokulala eli-1 elineshawa ekwi-suite kunye nendlu yangasese, ngelixa igumbi lokulala eli-2 linokufikelela ngokulula kwigumbi lokuhlambela elivaliweyo.
Phezulu phezulu uya kufumana indawo enkulu evulekileyo ephezulu kunye negumbi lokuhlala lesibini; le ndawo ibonakalise ukuba ifanelekile ekubambeni iminyhadala emincinci kunye neendibano zocweyo, kunye nefanitshala yentlanganiso/isiganeko kunye nezixhobo ezikhoyo xa ziceliwe. Oku kungasetyenziselwa igumbi lokulala elongezelelweyo elinokuba yi-attic, oomatrasi bomgangatho bakhona kwaye banokubekwa.
Igumbi lokulala eli-3 linokungenwa nge-loft okanye ngomnyango walo ophuma kwiveranda engaphambili. Eli gumbi linokusetyenziswa njengendawo yalo enamagumbi amabini okulala, elinegumbi lokuhlala elibanzi, ikhitshi elixhotyisiweyo, kunye negumbi lokuhlambela elivaliweyo.
Indawo izolile kwaye yenza indawo efanelekileyo yokuphumla kwaye ube nebarbecue nosapho kunye nabahlobo.